Kuvhara Uye Kufungidzira: Nyanzvi yeSalt Ivan Obradovic Anotsanangura Ngozi Inogona Kuitika uye Zvipo Zvokushandisa Kwemari
teleprompter glass for ipad.5;text-align:justify;"> Nenguva yemazuva ano yekugadzirwa kwemagetsi, izwi rekufungidzira nderokutiyakasimwa muuropi sechinhu chisina kunaka uye chakaipa. Asi kunyanya kufungidzira zvemari kwakaipa chaizvo here? Hapanamhinduro yakajeka, kana muverengi angangonditora ini ndisingatauri. Kuti tizvienzanise, tinofanira kunzwisisa zvinorehwa nekufungidzirauye kuvhara zviri nani. Izvo zvakasiyana zvakasiyana uye zvinosanganisira corollaries uye zviito zvakasiyana.
Ivan Obradovic, uyo aimbova Mutungamiriri weZvibudirira hweKatendi Semalt ,inopa ruzivo pamusoro pemamiriro akasiyana-siyana emari ekufambisa kufanana nekuvhara nekufungidzira, kurondedzera kuti chii chinowedzera uye chinowanikwakutarisa zvose zviri zviviri zvematambudziko emari.
Nyaya yeMari Inofungisisa
Paunenge uchitenga kana kutengesa zvishomanana mabhokisi ane ngozi pamusika kana nokuita OTCshandisa uye panguva imwe chete kutenga kana kutengesa kutengesa misika isina kusimba yakawanda neA + kana kuti yakakwirira yezvinhu zvakakosha zvinogadzirwamukaka kana mazino emasuo, ayo mune zvekugadzirisa matambudziko achange aine nzvimbo kana kuti kuwedzerwa kukosha, iwe uri kudzika. Uyewo, paunotenga kana pfupikutengesa mashizha pasina kukanganisa kunotevera nekuchengetedza zvikwata, iwe uri kuvimba nezvinyorwa, ruzivo uye ruzivo rwemukati, naizvozvo,chaizvoizvo, kufungidzira.
Kunyanya kufungidzira zvemari kwakanaka kana kwakaipa, inowanzoenderana kanakune miganhu yepecuniary arbitrage. Kana arbitrage yakanyatsoshanda, misika ichava yakanaka kune humwe hukama huri pachenauye inonzwisiswa zvakanaka, asi mikana yakawanda ye arbitrage ndiyo inonzi "ngozi arbitrage". Semuenzaniso, kutenga chinhu chisina kuchengetwauye kuperevedza kuwanda kwezvikwata mumhizha imwechete. Aya matengu zvechokwadi akasiyana kubva kune mumwe, uye hatidi kutarisirakutendeuka kwakakwana kwemutengo, saka tinoisa pangozi patinenge tisingakwanisi kururamisa..
Ndizvo zvakafanana, izvo vanhu vanoita pavanenge vachitengesa pane chikwata chinokwira kune vamwekukosha ndeyekuti kuwirirana kana kugamuchira kuri kupera. Kuvapo kwemiganhu yekururamisa kunowanikwa kune zvinokonzera zvipingamupinyi mune chikweretiuye zvichida kuti kunyange mune yakakwana yakanatswa, misika inokurwisa iwe nenzira inokugumbusa iwe kubva kune yakozvigaro pamberi pako zvingabatsire kubva pakupedzisira kwekugadzirisa kwako arbitrage. Kunyange zvakadaro, miganhu yekururamisa inowanikwa, pasineimumusika unogona kugara uchitamirwa kubva kune kusina kukwana kusvika kune yakakosha yemari yakatarisa. Tingave nechikonzero chekutenda mumusikainobudirira nekuda kwenhamba yemutambi inobatanidzwa mukutengeserana nekugadzirisa kwemashoko kubva mukati kuita iyoMufananidzo unoshanda zvikuru munyaya.
Vamwe vanhu vanoti mumusika hauna kukwana nokuti vanogara pamaekski uyevanoita mitengo yevatengi vavo kuburikidza nefoni. Zvinoratidzika kuti vateereri vavo ndivo vanotora mutengo vasingazivi kuti mutengo chaiwo chii.Pandaishanda sevatengesi vekutengesa muSemalt, ndave ndichiita semutengo wemari, saka ndine ruzivo rwakakwana rwemutengo wemapofuassigning. Ndadzidza kuti vanhu vanotora zvaunopa!
Zvisinei, tinoziva kuti kugadzirwa kwemashamba kunoreva kusatarisika kwemutengo kwetezvisinei kuti mutengi anoratidzirwa mutengo wakaipa nemutengesi wemusika nekuda kwehumwe hukama hukama. Izvo zvakafanana kana tikaenda mall imire, isuangatarisira mitengo yakawanda kuratidza zvaunowana apo iwe uchibhadhara mutengo iwoyo. Iwe haugoni kubatsirwa kubva pakusakosha kwacho nokuti iwe urimutengo taker. Saka tinogona kutaura nenzira yakanaka kuti mumusika unoshanda, asi tinogona kutenga zvinhu pamatengo asina kunaka kunyange tichienzanisa, tichazotengazvinhu zviri pamatengo chaiyo kana tikangotora zvigaro sezvatinopiwa kuti tiratidze ruzivo rwezvezvinhu. Same pano, tinoswedera pedyokubudirira kwekambani chete kana tikakwanisa kufungidzira nemari chaiyo yekutengo uye kunzwisisa kana muchengeti mutengo wemutengo kana mupiki!
Kusiyanisa pakati pekutengesa nekufungidzira
Chii chinonzi hukama hwakasimba pakati pemheta uye speculator? Ko hedger inorasikirwato speculator? Ndine chokwadi nazvo! Iyo nharo yakabatana nekutengeserana kwemari uye ramangwana kufungidzira ndeyekuti vatsoropodzi vanoita kuti vashandisenokuda kwevahedheni nevanhu, avo vanoda kuwanika mumisika pamutengo chero upi zvake panguva ipi zvayo. Nekugara uchipa zvipo uye mabhizimusi, vaongorori vanobvumira akunze kwekushandiswa kwepamutemo mune zvemari kwemisika, kuva chikamu chekambani. Mune mamwe mazwi, nokuda kwekutengesa kwekugadzira nehukuruhurumende iyo yakafanana nemuenzaniso Archer Daniel Midlands.
Mumwe angafunga kuti kutengesa kwemazimbe makuru aya kusununguka pasinamari mumaoko emafungidziro pamisika iyi, asi zvakasiyana chaizvo..Sezvinoita hedgers kutsvaga zvigaro zvakanakisisa uye nguvarusvingo, ndivo vahedheni vari kutora mukana wevanotsvakurudza, kwete vice versa. Iwe unoona vaongorori dzimwe nguva mumakona emakonavachiita mari kubva pamitambo ivo vachitamba nehupenyu remangwana. Kutengesa nenzira yakafanana nekutengeserana kwemazuva ekupedzisira kutengesa nekutengeswainofamba, kufungidzira kushanda mune zvakawanda zvezviitiko zvisiri pamutemo sezvo zvichiona kushandiswa kwemusika, chii chinogona kuguma mukusununguka kweisensi,kushungurudza kwezvinyorwa uye nyaya dzenguva refu.
Pfungwa huru inokonzerwa nekufungidzira ndeyekuti iwe unobvumirana sei nemusika mune zvechikorokana mufambiro nzira, ndisingarevi zvimwe zvekunyepedzera zvinhu, izvo zvinokakavadzana zvakanaka. Kugadzirisa pfungwa huru ini ndinoda kukumbaikozvino zvishoma munyaya yacho. Ini ndiri kunyanya muEfficicient Market Hypothesis yekutengeserana kana izvo zvinonzi chechipiri yemari nekuda kwekukurumidzaruzivo rwakapararira propensity. Ndinotenda kuti misika haina kunyatsoshanda zvakafanana zvakakwana zvakakwana. Saka, tineiyi ingano yakagadzirwa yekugadzira uye yekuongorora tsanangudzo zvachose nekuneta kuongororwa uye data mining neInternet inokutonga, chii chinoshanduka kuva chakanaka pakukomba asi kwete chekufungidzira.
Zvakare, zvimwe zvisizvo zvakadai sekuregererwa nekukura kwemaitiro zviri kupesanakuenda kuchikoro chekubhadhara mari, izvo zvinoita kuti hutano hwemari hutore. Ndiyo nzira yaunofanira kuita nekutengeserana kwekufungidzira. Mentalmufambiro, kusungira, kumiririra kune zvose zvinonyanya kukosha zvikonzero uye kuti kuchinja kwepfungwa kunobata sei kudyaramafambiro uye kuchinja kwechigadzirwa ndeye nzira yandinochengeta kugadzirisa!
Kwokukandwa nekufungidzira kunotora midzi
Kuongorora kwechishandiswa chinhu chinoratidzika kushanda kune vamwe vanhu, asi ini ndichazviitataura nyaya yandinonzwa. Mumwe munhu akaita zvikwereti kubva kumakore ekutengesa Cisco uye rimwe zuva akarasikirwa nemataundi emari. Ipapo akatarisaachikwira muhomwe ndokuti: "Chii! Materevhizheni midziyo!" Akanga ari kutengesa Cisco-se "ropa reSysco" uye achingoti awaneNenzira yekodzero kwemakore kusvikira kuparara kwemashoko kwakaputsika Cisco mu dot-com crash. Ndakaona mizhinji mienzaniso iyi nekufungidzirazvikwereti uye kukurumidza kukurumidza mazvikwereti kune rimwe zuva muThomson Reuters semuongorori uye iye zvino semuongorori wemari, asi zvakanyanyaIni ndinoona, iyo inoshamisa zvikuru misika yemabhizimisi inoratidzika kwandiri!
Kuwedzerwa kupera mumisika sematengesi ematengesi kunopedzwa neFederal Reservemutengo wokukwirira unovhiringidza kukwanisa kwevanhu kuti vashandise ivo pachavo kutenga zvigadzirwa. Mumakore ekuma1920 kufungidzira kwakawandisa kunotungamirirwa kunzvimbopamisika mania, iyo yakaguma nokuputsika kukuru. Muna 2007-2008 iyo imwechete yeimba yekugumbusa yakaita zvese zvishoma"pro-bhizinesi" ane dzimba gumi nemotokari bedzi bedzi nokuda kwekukuvadza kunofungidzira arbitrage!
Headgears ndivo ndivo vakachengetedza dosh! Asi tarirai ndiri kufambisa zvikuruyekusagadzikana. Kune rumwe rutivi, ngatitangei pamusoro pezvatiri kuita patinenge tichitengesa matengo ematengo: tiri kuisa mari mumari,vatsvakurudzi ndivo varume vari kusika kuwedzerwa uye kuwedzera mutambi kumusika..Saka izvi zvingava sei chinhu chakaipa chatinoitazviri nyore kumakambani ekurera mari kuburikidza nekubudisa zviyero pamitengo yakakwirira?
Saka, kutengesa zvakanyanya kwesaiti hakusi dambudziko. Kuwedzerwa kutengesa uyekutengesa kunoparadza kudzoka kwako kuburikidza nekutengesa kwekutengesa pakarepo paunenge uchiita mari kwete kubva pane zvisarudzo zvakanaka zvaunoita nemari yako,asi kubva kumusika wepamusoro unoshanda kwauri zvikurukuru. Mhanya pamusika wekutengesera mania asi iwe hausi chiratidzo chokudzvara, chiratidzoyekusasikirwa mashoma sekunge kana kunyange zvisungo zvisingabatsiri (mashizha) anotasva futi, zvino chimwe chinhu chakashata nemisika. Apo iyo federal igadziriswairi kusimudza mitero iyo inonyanya kuchinja kwemari kubva kunekutsvaga muzvikwata zvekugonesa USA dollar kuti iwedzere. Saka, vanhu vachatengazvimwe USA zvibvumirano zvemarudzi ose achaita kuti simba rekudenga riende. Tichifunga nezvekuti chido chezvibereko zvehutano hwakawanda huriyakavakwa pamusoro pehurumende yehuwandu hwezvikwereti, hurumende inogona kutora nguva dzose kubatana kwekambani.
Saka, nokufungidzira iwe uri kuunganidza mapepa ehurumende uye kupaUSD chii, uyewo, chichaita kuti chikwereti chiwedzere uye kuwedzereka kwemari kwete kwete chete kana zvisina kukwana mumusika. Iwe unoona,zvinhu zvose zvakanyanyisa kugadziriswa uye kufungidzira zvinogona kuva zvose zvakanaka uye zvakaipa.
Muchidimbu, kufungidzira haisi iyo nzira yekuita mari nokukurumidza kana isingaitikuwedzera mari yehupfumi. Izvo zvakanyanya kufanana nehuwandu hwekutsinhanisa hutungamiri kana unyanzvi hwakasimba hwekuwana arbitrage mikana ichaita zvechokwadiipai mubayiro mune zvakakosha. Kufungidzira kunogona kushanda kana munhu akanyatsoziva nezvemusika uye ane rudzi rwakadaro rwekuongororaapo iwe unogona kuve wakachenjera kune wepashambadziro wevatengesi vemusika, uyo, zvakare, anotora kune avo vane muganhu wakadaro.
Ini nevomunun'una vangu vanorerekera kutsigira pfungwa yokuti nokuva nezvakawandaruzivo rwemukati uye nekusimbisa maitiro ekutevedzera mafungiro iwe unogona kuwana zvakawanda zvakanyanya pasina kurasikirwa zvachose, asinguva dzose inokosha kuisa mungozi kana iwe uine ushingi zvakakwana uye uchitenderera kune zvose zvakanaka-kushanda intuition nekuwedzera buzz. Tinokurudzira kutengauye kubata matanda, nokuti kunyange kana iwe uchinge warasikirwa nemusika wepamusika, iwe uchakunda kubva pakuva nemwoyo murefu - mari yako haigonikungokura. Ichakura zvakanyanya kana iwe uchida kuvadzoka uye ipapo, kana iwe usingadi iwe, ichapera. Kazhinji, inoshanda seyo"ruoko rusingaonekwi."